Iyini amandla afihlekile we-nof backlinks?
Bonke abaphathi bewebhu bathi izinto ezifanayo. Izixhumanisi ezilandelayo ziwusizo ekusebenziseni iwebhusayithi, kanti akukho okulandelayo akusizi ngalutho. Nokho, lokho akunjalo ngempela. Kungase kuzwakala kahle esimweni lapho ucabanga kuphela ngokulingana okusheshayo kokuxhumanisa. Esikhathini eside, le ndlela isho ukuthi uchitha ubuningi besakhiwo sokuxhumanisa ongasithola kusuka kokungalandeli ama-backlinks.
Lingachazwa ngezici eziningana zesigaba. Okokuqala, i-Google isakhathalela izixhumanisi ezingezansi futhi zizithola zibalulekile ekuthuthukiseni idumela lomkhiqizo. Iqondisa ingosi ye-website engekho emuva kokulandela emuva uma uzama ukufingqa ukuthi unayo iphrofayili yokuxhumanisa enempilo nekhwalithi noma cha. Ngaphezu kwalokho, ama-backlink aphinde angabhaliswa, okusiza ukuqinisekisa ukuthi umthombo wewebhu usaphila. Ake ulandele emuva ngemuva kokudlala indima ebalulekile ezinhlelweni zokuthengisa.
Indlela i-Google ephendula ngayo ngaphandle kokulandela ama-backlink?
Iqiniso litsheliwe, i-Google ibhekana kokubili kokulandela futhi ayikho i-backlinks. Ngomunye umehluko owodwa kukhwalithi yelisi yokuxhumanisa, udlula nge-nof backlinks. I-Google ibheka izixhumanisi ezingekho emuva njengengxenye yephrofayli ye-backlink enempilo. Uma iphrofayli ye-backlink iqukethe kuphela ama-backlinks kuphela, ibonakala ilolisa ngezinjini zokusesha. Amaphrofayela anjalo angavamile angathola izijeziso. Ngakho-ke, ukuba nezixhumanisi ezingenayo i-net net worth of net worth.
Enye inzuzo ye-nofollow backlink yukuthi ibasiza izinjini zokusesha bese zikhomba isayithi lakho. Izixhumanisi ze-Nof zingangenza i-Google idlulisele elinye lamakhasi akho ewebhu angatholanga ithrafikhi ngaphambi kwalokho. Okuphawulekayo lapha ukuthi izixhumanisi ezingezansi ziqinisekisa ukuthi izinjini zokusesha zingathola, zikhahlele futhi zikhomba indawo yakho, ngisho noma ingadlulisanga ukulingana noma yenza inothi lokubhala amagama angukhiye wombhalo.
Kufanelekile ukuphawula ukuthi izixhumanisi ezingezansi zingabanjwa. Abaningi be-webmasters banqaba ukusebenza nge-nofollow amapulatifomu e-backlink njengoba becabanga ukuthi ayikwazi ukuphumelela ekuthuthukiseni ibhizinisi labo. Inkinga ukuthi aboni ukubaluleka kwangempela ngemuva kwezixhumanisi ezingalandeli. Uma ushicilela okuqukethwe okukhulu kwesikhulumi esinikeza izixhumanisi kuphela ezingalandeli, kusengakuzuzisa njengabasebenzisi abathola okuqukethwe kwakho okuhambisana nekhwalithi, bazokwabelana ngamapulatifomu abo amancane. Ngakho-ke, ngenxa yalokho, uzobe uthola eziningi ze-backlinks ze-organic dofollow.
Yingakho izixhumanisi ezingezansi zingahle zingadluli ukulingana kwezixhumanisi ngendlela abaningi bethu abayiqonda ngayo, kodwa kusabalulekile ekuthuthukiseni injini yethu yokusesha amasayithi. Akungabazeki ukuthi akukho okulandelayo emuva kwe-backlink okuthuthukisa ukuvezwa kwewebhusayithi ku-SERP. Futhi ukuchayeka, ngesikhathi salo, kungaletha okunye okulandelayo ukulandelana kwezixhumanisi ezenzelwe isayithi lakho.
Ukuphetha ngingathanda ukusho ukuthi ukulandela izixhumanisi zangemuva kufanele kube okubaluleke kunakho konke, kodwa akufanele uchithe amathuba okuxhumanisa nomaki ongayilandeli. Lezi zixhumanisi nazo zinokukwazi ukusiza ngokukhomba futhi kudala izixhumanisi ezengeziwe Source .